IMac Pro enokukhetha ukufaka imidwebo yeRadeon Pro W5500X | Ngivela kwa-mac
IMac Pro enenketho yokufaka ihluzo zeRadeon Pro W5500X
Inkampani yeCupertino iyaqhubeka nokwengeza izinketho zokwenza ngokwezifiso kwi-Mac Pro enamandla. Kulokhu, kungenye yezinketho zokuthuthukisa imidwebo yekhompyutha ebabazekayo futhi IRadeon W5500X ene-8GB GDDR6 isiyatholakala izilungiselelo zomsebenzisi ngokwezifiso.
Izinketho zamakhadi emidwebo zikhuphukile ezinyangeni kuleli qembu nakwabanye, sabona ukufika kweW5700X entsha nge-16GB ngo-Ephreli odlule. Kulokhu, kunketho eyodwa yokumisa etholakalayo, ngakho-ke labo abafuna ukuyifaka kweyabo izilungiselelo ze-Mac Pro yangokwezifiso ngesikhathi sokuthenga.
Intengo yama-euro angama-250 ongayengeza entengo
Imodeli yeRadeon engezwe kuzinketho zokucushwa ibangela ukuthi intengo yemishini inyuke ngama-euro angama-250 ngaphezulu, ngakho imodeli eyisisekelo ngaphandle kokumiswa kabusha kwe-Mac Pro ingaba ngama-euro ayizigidi ezingama-6.749 XNUMX. Le akuyona inketho ebiza kakhulu eqenjini uma kubhekwa ukuthi kukhona inketho yokwengeza iDos Radeon Pro Vega II Duo enamamojula ama-2 we-32 GB yememori ye-HBM2 ngayinye nge-13.500 euros.
Kunoma ikuphi, okokusebenza akuhloselwe abasebenzisi abangahambi thola okuningi emsebenzini yale midwebo, amaprosesa nezinye izinto zangaphakathi ezifakwe kwi-Mac Pro enamandla kakhulu.Imidwebo emisha ye-Radeon Pro W5500X iyakwazi ukusekela kuze kube ngabaqaphi abane abane-resolution ye-4K, i-5K monitor noma esinye seziqaphi ezibabazekayo ze-Apple, i-Pro Display XDR .
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Pro » IMac Pro enenketho yokufaka ihluzo zeRadeon Pro W5500X
Ukukhiqizwa kokukhonjiswa kwe-Mini-LED kuyanda
Ezinye izitolo ezingama-30 zizovala ngenxa ye-coronavirus